FFmpeg yakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 4.0 | Linux Vakapindwa muropa
FFmpeg iri yemahara software chirongwa Iyo inogona iyo inobvumidza vashandisi kusarudza, encode, transcode, mux, demux, kuyerera, kusefa, kutenderera odhiyo uye vhidhiyo, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda zvimwe.
FFmpeg inotsigira kubva pamafomu ekare kusvika kune achangopfuura. Muchidimbu, iyi izere, yekuyambuka-chikuva mhinduro yekurekodha, kushandura uye kuyerera odhiyo uye vhidhiyo.
1 Chii chitsva muFFmpeg 4.0
2 Maitiro ekuisa FFmpeg vhezheni 4.0 paLinux?
Chii chitsva muFFmpeg 4.0
FFmpeg yakagadziridzwa munguva pfupi yapfuura kuuya mushure memwedzi mitanhatu yeiyo 3.x dzakateedzana, FFMpeg 4.0 inopa mafirita madiki ekugadzirisa metadata yazvino muH.264, MPEG-2 uye HEVC mafomati, yekuyedza yeMicrosoftYUV encoder, Nvidia NVDEC yakawedzera H.264, MPEG-1/2/4, HEVC, VC1, VP8 / 9 uye MJPE hwaccel kududzira, uye Intel QSV-yakakurumidza MJPEG encoding.
Uyewo matsva matsva encoders uye madhodhi akaitwa aptX, aptX HD uye SBC, pamwe ne tsigiro yekumisikidza VAJI MJPEG uye VP8, TiVo ty / ty + demuxer, VideoToolbox HEVC encoder uye hwaccel, rutsigiro rwe E-AC-3 mafuremu anoenderana, pamwe neAmam AMF HEVC uye H.264 encoders.
LibreSSL tsigiro Kuvhurwa sosi yekumisikidzwa kweSSLL (Yakachengeteka Socket Layer) uye TLS (Yekutakura Layer Security) protocol, yakaitwa ne libtls raibhurari, codec2 encoding uye kududzira kutsigira kuburikidza libcodec2 raibhurari, AV1 tsigiro kuburikidza ne libaom raibhurari uye kutsigirwa kwe Haivision SRT protocol kuburikidza neraibhurari raibhurari.
Uye zvakare, kune iyo vhidhiyo zadza firita, odhiyo firita lv2 container, air conditioning firita, vhidhiyo yakajairwa firita, OpenCL yekufukidza firita, Intel QSV-yakawedzera pamusoro peya firita, VAAPI-yakakwidziridzwa ProcAmp (color bhalansi), denoise uye kupinza mafirita, firita shoma yeE-AC kuburitsa- 3 musimboti, zvakare se hilbert odhiyo firita.
ffmpeg 4.0 inorasa rutsigiro rweWindows XP sisitimu sezvo isisashandi, neiyo ikozvino vhezheni vhezheni yakatsigirwa iWindows Vista. Iyi vhezheni inobvisa zvakare ffserver chirongwa, pamwe neiyo ffmdec uye ffmenc demuxer uye muxer.
Maitiro ekuisa FFmpeg vhezheni 4.0 paLinux?
FFmpeg Inosanganisirwa mumazhinji ekuparadzira kweLinux, kunyangwe hazvo dzisiri dzese dzakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni, saka zvinodikanwa kuti uwedzere imwe yekuwedzera dura.
Para Panyaya yaDebian Jessie, zvakafanira kuwedzera zvinotevera, isu tinovhura terminal uye tigoita:
Isu tinogadziridza zvinyorwa
Isu tinoisa zvimwe zvinoenderana.
Zvekare isu tinogadziridza nekuisa FFmpeg, kana iwe uri kushandisa Debian 9 ingo mhanyisa iyi mirairo:
Panyaya yeUbuntu, isu tine yekuchengetedza iyo yatinogona kuzvitsigira isu, isu tinongo vhura iyo terminal uye kuitisa.
Finalmente tinoisa nemurairo uyu:
Panyaya yaFedora, isu tinofanirwa kuita rairo zvichienderana neshanduro yesystem yedu, izvi zvikaitika kana usina rpm fusion repositori yakawedzerwa kune yako system.
Kana iri Arch Linux uye zvigadzirwa zvatinomhanya chete:
Uye neizvi, isu tatova neiyo yazvino vhezheni yeFFmpeg yakaiswa mune yedu sisitimu, nekufamba kwemavhiki kana mwedzi isu tichatangawo kuona shanduro nyowani nemabasa akawedzerwa kune vese avo vhidhiyo edhita vanoshandisa FFmpeg.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » FFmpeg yakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 4.0